Yini Okufanele Ngiyazi Ngaphambi Kokuthenga I-Peptide Alarelin?
I-86 (1360) i-2568149	info@phcoker.com
I-Yohimbine HCL ≥98%
I-Synephrine HCL ≥98%
I-Synephrine Tartrate ≥98%
I-tianeptine usawoti sodium ≥98%
I-4-Methyl-2-pentanamine hydrochloride (i-DMBA) ≥98%
I-Magnesium (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate ≥98%
Isizinda se-NSI-189 ≥98%
I-NSI-189 Phosphate ≥98%
I-Hydrafinil (i-9-Fluorenol) ≥98%
I-Sodium ye-Monosialotetrahexosylganglioside (GM1) ingqondo yengulube ≥98%
I-7P i-Compound ≥98%
Yini Okufanele Ngiyazi Ngaphambi kokuthenga iPeptide Alarelin?
I-1. Yini i-Alarelin?
I-2. Indlela Yokusebenza
I-3. Isicelo se-Alarelin
I-4. Ukusetshenziswa kwe-Alarelin ye-Reference
I-5. Izinzuzo ze-Alarelin
I-6. I-Alarelin Side Effects
I-7. Isimo sesitoreji se-Alarelin
1. Yini i-Alarelin?
I-horonone ye-Gonadotrophin-release (Alarelin) ingachazwa njenge-synthetic LR-RH agonist, esebenza ngokukhuthaza ukukhiqizwa nokukhululwa kwe-LH ne-FSH kusuka emigodini yakho ye-pituitary. Isidakamizwa sithandwa kakhulu ngokufakwa kwe-ovulation kanye nokuphathwa kwe-endometriosis. Isidakamizwa siye sanikeza imiphumela yekhwalithi njengoba itholakale ingaba usizo olukhulu kakhulu njengengxenye yokulwa nokuguga. I-Alarelin iyatholakala kokubili ezitolo zakwa-inthanethi nezomzimba. Noma kunjalo, njalo qinisekisa ukuthi uthenga i-Alarelin kusuka ku- umkhiqizi othembekile wase-Alarelin. I-Alarelin ukudayiswa ingase ihluke kusuka kumkhiqizi oyedwa kuya komunye ngokwemigomo nemigomo. Kuningi Abahlinzeki base-Alarelin emakethe kodwa thatha isikhathi sakho ukufuna okuhle kakhulu. Imithi yezinga eliphezulu iqinisekisa imiphumela ephezulu ye-Alarelin.
I-Alarelin yemvelo (79561-22-1) amafomu akhona ezilwaneni futhi asetshenziselwa ukugqugquzela ukuvuthwa kwama-females. Izinguqulo ze-Alarelin zenziwe nge-antagonist ye-LH-RH esetshenziselwa izilinganiso ezinkulu eziphakeme kune-LH-RH yemvelo engatholakala kwi-gonadotropins yokuvimba okufakwe ku-vitro noma ukuvuthwa kwe-ovulation. Umsebenzi we-Alarelin ukuqala i-pituitary gland ukukhiqiza ngaphezulu i-FSH-LH.
2. Indlela Yokusebenza
Njengoba kushiwo ngenhla, i-Alarelin, uma isangena emzimbeni wakho, ivuselela izigulane zakho ze-pituitary ukukhiqiza ama-hormone amaningi okuthiwa i-Luteinizing (LH) ne-Follicle-stimulating hormones. Amahomoni amabili adlala indima ebalulekile kumjikelezo wonke wokukhiqiza wesifazane. Ukukhula kwe-FSH ukulawula, izinqubo zokuzala, nokuvuthwa kokusakaza. Ngakolunye uhlangothi, kwabesifazane, i-HH i-hormone ibangela ukuthuthukiswa kwe-corpus luteum kanye nenqubo yokugcoba. Kwesilisa, i-Alarelin isebenza ngokukhuthaza ukukhiqizwa kwehomoni ye-testosterone. Ukuze inqubo yokukhiqiza umzimba iphumelele, umzimba wakho kufanele ube sesikhundleni sokukhiqiza ngokwanele i-LH ne-FSH. I-Peptide Alarelin kungaba usizo olukhulu ekuthuthukiseni ukukhiqizwa kwama-hormone amabili abalulekile. Kodwa-ke, qiniseka ukuthi uthatha isidakamizwa ngaphansi kwesimiso somdokotela ukuze ugweme ukubhekana nemiphumela emibi kakhulu. I-Alarelin isebenza kahle uma uthatha isisindo esifanele futhi ubambelele emiyalweni yokusebenzisa udokotela wase-Alarelin. Ungacela futhi umhlinzeki wase-Alarelin kabanzi mayelana nalesi sidakamizwa uma udinga noma yikuphi ukucaciswa okwengeziwe.
I-Alarelin isetshenziselwa ucwaningo lwezokwelapha ukuze iqonde imiphumela yezidakamizwa emzimbeni wesilwane ngakho-ke izimo ezihlobene nesifundo sokuzala. Ngakho-ke, lo muthi utholakale ukuthi ungenye yezinto ezingcono kakhulu zokusiza izidumbu zabantu, ikakhulukazi abesifazane, ekuthuthukiseni izinqubo zabo zokuzala. Amadoda angasebenzisa lesi sidakamizwa ukuthuthukisa ukukhiqizwa kwe-hormone ye-testosterone. Isicelo se-Alarelin sincike ekugulweni kukadokotela. Isidakamizwa sitholakala kumafomu we-powder namajection. Udokotela wakho uzoba umuntu ongcono kakhulu wokukuqondisa ku-application ye-Alarelin yesimo sakho sezokwelapha ngemuva kokuhlola ukuhlolwa kwezokwelapha. Okuluhlaza Alarelin powder Isidakamizwa sisetshenziselwa ukuphatha i-Endometriosis noma i-Hysteromyoma.
Ngezijovo, kuzodingeka uhlele umthamo we-Alarelin njalo futhi uthole umjovo emithini yakho. Ungazifaka futhi ekhaya kodwa qiniseka ukuthi udokotela wakho uqeqesha ngaphambi kokuba uqale ukulawula umthamo. Khumbula, kungabonakali Ukusetshenziswa kwe-Alarelin kungabuye kube yingozi empilweni yakho noma kungaholela kwezinye izinkinga zempilo. Ukuthenga i-Alarelin ukudayiswa phezu kwe-counter kungase kube yingozi nakakhulu ngakho uma uyithola enkampanini ongayithembi. Umkhiqizi ohlonishwayo wase-Alarelin kufanele akunikeze umhlahlandlela wokusetshenziswa kwezidakamizwa. Udokotela wakho kufanele futhi, akusize ekuthengeni i-Peptide e-Alarelin engcono kakhulu noma ungayithola kalula kuwebhusayithi yethu.
4.Ukusetshenziswa kwe-Alarelin ye-Reference
I-Alarelin kufanele isetshenziswe ngendlela elandelayo;
Thatha i-gauze ye-alcohol gaupper kokubili kokushukela kwe-diluent ne-peptide vial
Manje sine-sync ye-1cc bese uthatha i-diluent yakho ethandwayo. Khetha isilinganiso esilungile njengoba uhanjiswe udokotela wakho futhi ungahambi okungenani noma ngaphezulu kunqunyiwe; kungabangela imiphumela emibi noma ukuhluleka ukuthola lokho okufunayo Imiphumela ye-Alarelin.1 ml noma (cc) ngesibindi se-10mg se-melanotan kusho ukuthi umthamo wakho we-Alarelin kufanele ube ngamamaki ayishumi ku-syringe ye-U100 slin elingana no-1mg we-Melanotan. Ngakolunye uhlangothi, i-2 ml 9cc) nge-10mg ye-melanotan isho ukuthi amamaki ayishumi emgqeni we-U100 afana ne-1mg melanotan.
Emva kwazo zonke izinyathelo ezingenhla, manje thatha inaliti yakho equkethe i-diluent bese uyifaka emgqonyeni wakho we-vial ophihliweyo bese uvumela i-diluent ihlakaze i-peptide yakho.
Uma nje i-diluent ingeziwe ebhodleleni, manje ngobumnene uphendule isixazululo kodwa ungayishukumisi ngamandla kuze kube yilapho wonke ama-powders ane-lyophilized dissolve futhi uhlala ngokucacile
isixazululo. Manje i-Alarelin yakho isilungele ukusetshenziswa
Thenga i-Alarelin evela kumthengisi onolwazi nangokwethenjelwa ukuze ujabulele imiphumela ephezulu ye-Alarelin. Okuncono I-Alarelin ukudayiswa kufanele unikele ngokuzuzwa okulandelayo;
Ithuthukisa amazinga we-testosterone kumadoda
Isidakamizwa kulula ukuyisebenzisa, futhi siphatha i-Endometriosis kubesifazane. Vele uqiniseke ukuthi ulandela izakhiwo zokuxuba ne-Alarelin zemiphumela engcono.
Ivuselela i-pituitary gland ukukhiqiza ngaphezulu i-LH ne-FSH.
Ihambisa ikhwalithi nemiphumela yesikhathi eside uma isetshenziswe kahle.
Isidakamizwa sitholakala kalula kuwebhusayithi yethu, futhi senza ukudiliva okusheshayo.
Njengamanye ama-peptide, i-Alarelin ingasiza ekunciphiseni izimpawu zokuguga.
Izinselele zokukhiqiza izixazululo ezinhle kunabesifazane.
6.I-Alarelin Side Effects
Ngaphandle kwezinzuzo ezaziwa e-Alarelin, lesi sidakamizwa sinehlangothini elimnyama ngakho-ke uma siphelelwe yisikhathi. Kodwa-ke, imizimba yabantu yasabela ngokuhlukile emikhiqizweni ehlukahlukene. Abanye abantu babhekana nemiphumela emibi kakhulu kanti abanye bangase babe nesipiliyoni esidabukisayo ngisho nangemva kokulandela isicelo se-Alarelin esifanele. Okufanayo kusebenza nabasebenzisi be-Peptide Alarelin futhi babheka ukubuyekezwa komkhiqizo, uzobona ukuthi iningi labantu abasebenzisa izidakamizwa bayajabula ngemithi, kodwa isigaba sabasebenzisi senze isipiliyoni esibi ngokungeziwe okufanayo. Eminye yemiphumela emibi ye-Alarelin ihlanganisa;
Ukwandisa ukugcinwa kwamanzi okubangelwa ukudlula izidakamizwa
Ubuhlungu noma ubuhlungu emhlabeni jikelele
Kungabangela ukulahlekelwa isisindo / ukuzuza.
Ngakolunye uhlangothi, kuneminye imiphumela emibi ye-Alarelin ongayithola ngenkathi uthatha imithi yakho, futhi ithomeke nokuthi umzimba wakho uphendukela kanjani nomuthi. Abasebenzisi abadlula ngokweqile imishanguzo bavame ukubhekana nemiphumela emibi ye-Alarelin, kodwa lokho akusiyo njalo. Uma ubona noma yimiphi imizwa noma izibonakaliso eziyingqayizivele xhumana nodokotela wakho ngokushesha ngaphambi kokuba isimo sibi nakakhulu. Eminye yemiphumela emibi kakhulu ihlanganisa;
Imiphumela ayikhawulelwe kulabo okushiwo ngoba abantu abahlukene banezimo ezihlukahlukene kodwa qiniseka ukuthi uya ezihlolweni ezivamile zezokwelapha ngenkathi uthatha isilinganiso sakho se-Alarelin.
7. Isimo sesitoreji se-Alarelin
Emva kokuthola imithi evela kumthengisi wase-Alarelin ingxenye ekhona yesitoreji kuwumthwalo wakho wonke. Umkhiqizi we-Alarelin uzokhumbuza nokuthi ungayilondoloza kanjani lesi sidakamizwa. Isitoreji esifanele sizokuqinisekisa ukuthi inzuzo enkulu ye-Alarelin. Ngokuvamile, le mithi igxilile ekamelweni lokushisa, kodwa uma uzisebenzisela cishe amasonto amathathu, kufanele ugcine i-Alarelin endaweni ekhona -18 degrees Celsius. Ngezinsuku ezingu-2-7 zokusetshenziswa, i-4 degrees Celsius izoba isimo esihle sokugcina. Uma ngabe uhlela ukusebenzisa lesi sidakamizwa isikhathi eside, kunconywa ukuthi ungeze amaprotheni abathwali njenge-0.1% BSA OKANYE. Khumbula ukuvimbela imijikelezo ye-frozen-thaw ngenkathi igcina lesi sidakamizwa.
Wei, S., Gong, Z., Dong, J., Xie, K., Wei, M., Zhang, J., & Wang, J. (2012). Imiphumela ye-alarelin yokuzivikela okusebenzayo ekuboniseni i-GnRHR, i-FSHR ne-LHR ekupheni kwe-pituitary ne-GnRHR kuma-ovari wezimvu. Jiangsu Journal of Agricultural Sciences, 28(1), i-114-120.
Zhang, S., Han, J., Leng, G., Di, X., Sha, C., Zhang, X., ... & Liu, W. (2014). Indlela ye-LC-MS / MS yokuzimisela ngesikhathi esisodwa kwe-goserelin kanye ne-testosterone ku-plasma ye-rat for izifundo ze-pharmacokinetic kanye ne-pharmacodynamic. I-Journal ye-Chromatography B, 965, I-183-189.
Ararooti, ​​T., Niasari-Naslaji, A., Asadi-Moghaddam, B., Razavi, K., & Panahi, F. (2018). Impendulo enesifo esibucayi esilandelayo kulandela i-FSH, i-eCG-FSH ne-hMG kanye namazinga okukhulelwa alandela ukudluliswa kwemibungu ye-blastocyst enezinhlamvu ezihlukene nobujamo ekamera le-dromedary. I-theriogenology, 106, I-149-156.
Izinzuzo ze-6 ze-Nootropic Sunifiram (DM235) Powder
Izifundo zamuva ze-2019 kwiHymon Growth Hexarelin
I-Shangke Chemical yinkampani ephezulu echwepheni ezisebenzayo ezizimele eziphambili zokwelapha (APIs). Ukuze ulawule ikhwalithi ngesikhathi sokukhiqiza, inqwaba yabachwepheshe abanolwazi, imishini yokukhiqiza yokuqala kanye nama-laboratories yiwona amaphuzu ayisihluthulelo.
I-86 (1360) i-2568149
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.aasraw.com www.gdc-sherb.com
© Shangke Chemical 2019 | Kudalwe nge ngu www.phcoker.com